Ku dhowaad 10 ruux oo ku naf waayey shil gaari oo caawa ka dhacay degmada Xamar jajab |
Ku dhowaad 10 ruux oo ku naf waayey shil gaari oo caawa ka dhacay degmada Xamar jajab
Ugu yaraan shan 7 ayaa ku naf waysey in ka badan 10 kalena wey ku dhaawacmeen shil gaari oo caawa salaadii maqrib ka dib ka dhacay isgoyska Ambulatooriyadii Ceelgaab oo ku yaala degmada Xamar jajab ee magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in shilkan uu yimid ka dib markii gaari xamuul fara badan waday oo fariinka goostay uu ku fariistay gaari rakaab ah gaar ahaan kuwa homeyda loo yaqaano oo shacab fara badan ay la socdeen xili uu aad u rarnaa.
“Gaari xamuul ah oo jawaano fara badan lagu soo raray oo fariinka goostay ayaa madaxa ku qaatay gaariga homeyda ah oo taagnaa isgoyska Ambulatooriyo Ceelgaab ka dibna siduu u waday ayuu gaarigii rakaabka ahaa wuxuu ku qabtay derbiga guri ku yaala isgoyska dhinaciisa, dadkii ku jirayna iyo gaarigiina waa isku shiilmeen” sidaas waxaa yiri goob jooge ka mid ahaa dadkii halkaas ku sugnaa.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhamaantood ka mid ahaa rakaabkii la socday gaariga rakaabka ah oo ka mid ahaa gaadiidka isaga goosha degmada X/weyne iyo Km4, iyadoo ay jiraan warar khasaaraha dhimashada gaarsiinaya illaa 8 qof, waxaana dadka ku dhaawacmay shilkaas loola cararay isbitaalada Madiina iyo Banaadir.
Goob joogayal ayaa sheegay in Gurmadkii loo fidinayey dadkii shilkaas gaari wax ku noqday ay saameyn ku yeesheen labo qarax oo isla xiligaas lagu weeraray xarun ciidanka nabad sugidu ku leeyihiin meel ku dhow goobta uu shilku ka dhacay, kuwaasoo sababay in goobahaas oo dhan laga kala cararo iyadoo qaar ka mid ah dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay ay ku jiraan gaariga dhexdiisa.
Weriye booqday goobta uu shilkaas ka dhacay ayaa dayniile.com u sheegay inuu arkay meydka haweeney la garan waayey oo goobta taala kana mid aheyd dadkii shilkaas ku dhintay, isagoo xusay in burbur aan ka soo kabasho laheyn uu gaaray gaariga rakaabka ah, waxaana weriyahaas uu sidoo kale xusay inuu goobta ku arkay dhiig iyo jawaano ka soo daatay gaariga oo dhulka daadsan.
Waaa shilkii ugu xumaa mudooyinkan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana warar hadda na soo gaaraya ay sheegayaan in goobta uu shilkaas ka dhacay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugida iyo taraafikada dowlada Somalia.